Sehatra fisotroana zava-pisotro - BALLYA
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainana ankehitriny, ny indostrian'ny zava-pisotro dia mivoatra haingana manerantany. Zava-pisotro isan-karazany, ao anatin'izany ny ronono, yaorta, ranom-boankazo, labiera, dite vonona hisotro, zava-pisotro misy gazy, zava-pisotro zavamaniry, rano anaty tavoahangy, sns, ary karazana hafa. Tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fiarovana ny zava-pisotro isika ary hiantoka ny fahasalaman'ny mpanjifa. BALLYA - Mampahafantatra karazana tsipika fitsapana mikrbiolojika sy mpanelanelana vonona hampiasaina ho toy ny famantarana ny kalitaon'ny mpamokatra maro karazana.
BALLYA - Ny takelaka fanisana, be mpampiasa amin'ny ronono, zava-pisotro, fanodinana hena, indostrian'ny rano. Raha ampitahaina amin'ny fomba Agar, dia tsotra be ny mampiasa azy, tsy mila mihodina ny fomba sarotra, fohy ny fotoana hahitana, mahomby, mitahiry ny vidin'ny asa.
Takelaka fanisana aerobika
E. Takelaka fanisana Coli
Takelaka fanisana Coliform
Takelaka fanisa Salmonella
Kolontsaina efa vonona hampiasaina
Mediam-bahoaka Kolontsaina Aerobika (PCA)
E. Coli Kolontsaina Medium (VRBA-MUG)
Kolontsaina misy masirasira sy bobongolo (Rose Bengal)
Medium kolotsaina masirasira sy bobongolo (PDA)
Momba ny zava-pisotro
Ny zava-pisotro dia zava-pisotro, izay rano hosotroin'ny olona na ny biby fiompy. Izy ireo dia fonosina betsaka ho an'ny fisotroana mivantana na fanaovana labiera miaraka amin'ny ampahany amin'ny rano. Vokatra misy votoatin'ny etanôla (votoatin'ny besinimaro) tsy mihoatra ny 0.5% Azo zaraina ho zava-pisotro matevina na endrika mivaingana ihany koa, ary ny asany dia ny mamaly ny hetaheta sy mameno ny angovo.
Lisitry ny zava-pisotro
Amin'ny ankapobeny ny zava-pisotro dia azo zaraina ho zava-pisotro misy alikaola sy zava-pisotro tsy misy alikaola.
Zava-pisotro tsy misy alikaola
Fisotro misy karbaona: zava-pisotro karazana bubble namboarina tamin'ny alàlan'ny fampifangaroana gazy karbonika sy karazana zava-manitra, rano, syrup ary loko hafa. Toy ny cola, soda, sns. Ny tena ilaina indrindra dia ny: rano karbônika, asidra citrika ary zavatra asidra hafa, siramamy, zava-manitra ary ny sasany misy kafeinina.
Fisotroana ranom-boankazo sy legioma: ranom-boankazo isan-karazany, ranona vao voahidy, ranona legioma, ranom-boankazo mifangaro sy ranona legioma sns.
Zava-pisotro misy alikaola: zava-pisotro misy singa mahavelona isan-karazany mba hanomezana fahafaham-po ny filana manokana an'ny vatan'olombelona.
Zava-pisotro dite: dite maitso isan-karazany, dite mainty, dite voninkazo, dite oolong, dite barley, dite raokandro, ary dite misy ranomandry. Ny sasany misy voasarimakirana.
Zava-pisotro ronono: ronono, yogurt, dite ronono sy zava-pisotro hafa miorina amin'ny ronono vaovao na zavatra vita amin'ny ronono.
Fisotroana kafe: zava-pisotro misy fangaro kafe.
Zava-pisotro misy alikaola
Divay mamoaka divay: zava-pisotro misy alikaola ny divay mamoaka labiera vokarin'ny fanamasinana ny fitaovana fanaovana divay sy ny fitahirizam-bokatra ao anaty fitoeran-javatra iray mandritra ny fotoana iray. Ny alikaola misy an'ireny divay ireny amin'ny ankapobeny dia tsy avo, amin'ny ankapobeny tsy mihoatra ny folo isan-jato. Ity karazana divay ity dia misy divay, divay ary divay vary.
Divay voadio: ny fizotry ny famokarana divay voadio amin'ny ankapobeny dia ahitana ny fizotran'ny famotehana, fanamasinana, fanamasinana ary ny fahanteran'ireo akora. Ity karazan-divay ity dia misy alikaola avo kokoa noho izy io satria diovina amin'ny distillation.
Divay mifangaro: ny divay mifangaro dia mifototra amin'ny divay mamoaka divay, divay voadio na alikaola fihinana ho toy ny fitoeran-divay, manampy karazan-java-boahary voajanahary na artifisialy, ary nohamarinin'ny dingana manokana mba hamoronana divay miharo misy loko manokana, hanitra, tsiro ary ny karazany.
Tsara ny manamarika fa zava-pisotro misy alikaola maro no mitaky fanamasinana mikraoba hamokarana azy ireo. Raha tsy voatana araka ny tokony ho izy ny zava-pisotro misy alikaola vokarina dia mety misy mikraoba be loatra. Ireo zavamiaina bitika tsy ilaina ireo dia mety hiteraka voka-dratsy amin'ny vatan'olombelona.
Inona no atao hoe microorganism?
Teny iraisana ho an'ny zavaboary bitika rehetra izay sarotra hitan'ny olona amin'ny masony. Ny mikraoba dia misy bakteria, viriosy, holatra ary ahidrano vitsivitsy. (Fa ny zavamiaina bitika sasany dia hitan'ny maso mitanjaka, toy ny holatra, ganoderma, sns izay an'ny holatra.) Ny viriosy dia kilasin'ny "zavamananaina tsy sela" izay misy singa vitsivitsy toy ny asidra niokleika sy ny proteinina, saingy ny fahavelomany tsy maintsy miankina amin'ny sela velona. Araka ny tontolo iainana samihafa dia mizara zavamiaina bitika sy zavamiaina bitika an-dranomasina izy ireo. Raha ny fanasokajiana ny firafitry ny sela dia mizara microorganisma prokaryotic sy microorganism eukaryotic izy ireo.
Ny virus mikraoba dia virus iray izay mamindra mikraoba, ao anatin'izany ny bakteria toy ny bakteria, holatra, actinomycetes, na spirochaetes. Anisan'izany ny viriosy bakteria, viriosy holatra sns.
Ny zavamiaina bitika pathogenika dia zavamiaina bitika izay afaka manafika ny vatan'olombelona, ​​miteraka areti-mifindra ary na dia aretina azo aza, na antsoina hoe pathogen. Anisan'ireo pathogens, bakteria sy virus no tena manimba. Ny zavamiaina bitika pathogenika dia manondro ny vatan'ny prion, katsentsitra (protozoa, kankana, bibikely fitsaboana), holatra, bakteria, spirochete, mycoplasma, rickettsia, chlamydia, ary virus.
Aorian'ny famoahana matetika ireo zava-mahadomelina chemotherapeutic sasany, dia mitohy mihena ny fihenan'ny otrikaretina sasany, mba hahafahan'ny pathogen farany hanohitra ilay fanafody nefa tsy novonoina na nosakanana. Io no fanoherana ny pathogen amin'ny zava-mahadomelina, izay antsoina hoe fanoherana na fanoherana. Fanafody. Ny antony lehibe mahatonga ny fanoherana dia ny tsy fahampian'ny fatra fanafody na fampiasana fanafody maharitra. Bakteria sy katsentsitra maro no miteraka fanoherana. Ny pathogens dia miteraka fanoherana, matetika mampihena ny fahombiazany na tsy mahomby tanteraka. Ny lozam-pifanoherana mahazaka zava-mahadomelina dia lova, ka ilaina ny mahatakatra tsara ny famantarana rehefa mitsabo aretina sy misoroka ny fidorohana zava-mahadomelina.
Lisitry ny zavamiaina bitika
Araka ny fahasamihafan'izy ireo amin'ny firafitra, ny firafitry ny simika ary ny fomba fiainany dia azo zaraina ho sokajy telo izy ireo.
1. Mikraoba bitika bitika eukaryotic Ny nukleus dia manana fahasamihafana avo lenta, ao anatin'izany ny membrane niokleary, ny nucleoli ary ny chromosome; misy organeles feno ao amin'ny cytoplasm (toy ny retikulum endoplasmic, ribosome ary mitochondria, sns.) Anisan'ny karazana microorganism io ny holatra.
2. Mikraoba bitika Prokaryote Ny haavon'ny fahasamihafana niokleary dia ambany, tsy misy afa-tsy vinavina voalohany, tsy misy membrane niokleary sy niokleola; ny organelles tsy tonga lafatra. Misy karazany maro amin'ireny zavamiaina bitika ireny, ao anatin'izany ny bakteria, Borrelia, Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia ary Actinomycetes.
3. Ny zavamiaina bitika tsy sela dia tsy manana firafitry ny sela mahazatra ary tsy misy rafitra anzima miteraka angovo. Ao amin'ny sela velona ihany no ahafahan'izy ireo maniry sy miteraka. Anisan'ireo karazana zavamiaina bitika ireo ny viriosy.
Mikraoba amin'ny famokarana divay
Bakteria misy alikaola:
Masirasira amin'ny labiera: Nozaraina ho masirasira ambony sy masirasira ambany. Na dia samy hafa aza ny fahaizan'ny fermentation sy ny fampisehoana azy ireo, dia mety amin'ny ranon-tsakosaka amin'ny fampiasana ny starch ho toy ny akora. Izy io dia fantsakana faran'izay tsara amin'ny famokarana labiera, alikaola ary whisky;
Ireo karazana masirasira an'ny Brewer: ny sela kolontsaina ao anaty wort dia boribory lavalava, indraindray ny vitsivitsy dia miendrika sosisy; mahazaka asidra avo lenta, ny fanoherana ny étanol dia mety hahatratra 10% mahery, mahazaka dioksidan'ny karbaona ambany; an'ny masirasira manaraka, mety amin'ny fermentation divay
Schizosaccharomyces: Mampiavaka azy amin'ny fampitomboana amin'ny fizarazarana, ary ny sela dia varingarina, mahitsizoro na boribory; afaka manondrana siramamy isan-karazany izy; tsy mitombo amin'ny éthanol amin'ny nitrates samihafa izy io;
Saccharomyces cerevisiae: mampiasa glucose na alikaola toy ny loharano karbôna izy ary afaka mamokatra tsiro mandritra ny fanamasinana.
Bakteria fanaovana sorona:
Holatra manova ny akora misy starchy ho glucose. Herin'ny saccharification matanjaka, haingam-pandeha haingana, fitoniana hafanana tsara, fanoherana asidra sy alikaola, tsy misy na kely aza famokarana pectinase izay afaka mampihena ny habetsaky ny methanol novokarina Matetika ampiasaina amin'ny indostrian'ny mpamokatra labiera dia ny Aspergillus, Rhizopus, endosporum, Monascus ary Mucor.
Ny bakteria sy ny metabolites
Lactobacillus, bakteria asidra acetic, bakteria asidra butyric, sns dia matetika ampiasaina amin'ny indostrian'ny divay.
Ny fandotoana mikraoba dia manondro ny fandotoana biolojika ny sakafon'ny biby ateraky ny bakteria sy ny poizina bakteria, ny bobongolo ary mycotoxins ary viriosy. Ny zavamiaina bitika be loatra amin'ny zava-pisotro misy alikaola dia handoto ihany koa ireo zavamiaina bitika amin'ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola. Ireo zava-pisotro voaloto dia tsy vitan'ny hoe very ny sakafo mahavelona azy tany am-boalohany, fa mety hiteraka areti-mifindra toy ny aretin'ny taovam-pisefoana koa.
Ny fandotoana mikraoba dia misy karazana fandotoana mikraoba bitika telo, ny fandotoana mikraoba mikraoba ary ny fandotoana poizina mikraoba.
Hita avy amin'ny fizotran'ny fanamboarana divay fa misy karazany maro ny zavamiaina bitika ampiasaina amin'ny fanaovana divay, ary zavamiaina bitika samy hafa no ampiasaina amin'ny divay samihafa. Ho an'ny karazan-divay sy karazan-javamananaina samihafa, Ballya dia nanolotra fantsom-pitsapana mikraoba mifanaraka aminy sy haino aman-jery vonona hampiasaina ho toy ny tondro famantarana kalitao.